Banks leedahay tiro badan oo kombiyuutarada sare iyo qalab kale, taas oo kaliya la qalo karaa qol culus. deegaanka qolka waxay leedahay shuruud adag heerkulka, qoyaan, nadiifsanaanta, buuq, koranto ma guurto ah, faragelin ku electromagnetic.
Wax soo saarka xoog deggan 24 saacadood oo isku xiga ee xoogga lagu qiimeeyo (10% dollar muddo 1 saac ah la ogolaan kasta 12 saacadood), in shuruudaha soo socda. Altitude height 1000 mitir oo hoos.
Heerkulka xadka hoose -15 ° C, xadka uper 40 ° C
qaylada 2.Low iyo hawada nadiif ah
Korontada waa in uu ahaadaa super yar yahay si loo xaqiijiyo badbaadada ee nidaamka xogta; sidoo kale shaqaalaha bangiyada ku raaxaysan karaan jawi shaqada loo igmaday.
Warshadu hawada nadiif ah ku hubin karnaa nadiifsanaanta qol computer iyo sii nidaam computer ka iyo nidaamka xogta ammaan.
Mashiinka ayaa si toos ah kormeeri karo danab ku bilaabatay batteriga iyo siin afuuftaan. Mashiinka ayaa si toos ah loo joojiyo doonaa oo u siin calaamadaha la xiriira in arrimaha soo socda: kulka biyaha sare, heer-kulka biyaha ku yar yahay, heerka biyaha ku yar yahay, dollar, bilaabi failure. Mashiinka joojin doonaa in arrimaha soo socda: in ka badan xawaaraha, circuit gaaban, wajiga la'aanta, in ka badan danab, danab khasaare, soo noqnoqoshada hooseeyo. Mashiinka siin doonaa alarm ee arrimaha soo socda: saliid cadaadis hoose, heer-kulka biyaha sare, heerka biyaha hooseeyo, in ka badan load, bilaabi failure, in ka badan xawaaraha, circuit gaaban, wajiga la'aanta, in ka badan danab, danab khasaare, inta jeer ee uu hooseeyo, danab yar u bilaabatay batari, heerka saliidda hoose iyo Relay xiriir nidaamka alaarmiga.
Waayo, auto bilaabi danab xoog leh function AMF, ATS caawiyaa ay ogaadaan auto bilowga iyo stop auto. Marka ugu weyn ee ay ku guul daraysato, matoor awood bilaabi kartaa 5 seconds (hagaajin) gudahood. Matoor awood u bilaabi kartaa keligeed isku xigta saddex jeer. Wareegista ka load weyn load matoor dhameystiray 10 ilbiriqsi gudahood iyo gaadho qiimeeyo saarka awoodda wax ka yar 12 ilbiriqsi. Marka awood dhaxe helo dib, matoorrada si toos ah joojin doonaa 300 ilbiriqsi (hagaajin) ka dib markii mishiinka qaboobeyso qalabaysan UPS gudahood.
4.With brushless PMG AC matoor, mishiinka leeyihiin anti-faragalin xoog leh
waxqabadka, iyo circuit gaaban oo xoog leh u adkeysan (sida caadiga ah 3 jeer ee hadda lagu qiimeeyo 10 seconds) awoodda aqbalaadda
failure Celceliska aan bareeg ka yar 2000 saacadood danab kala duwan xeerka at load 0% intii u dhaxaysay 95% -105% ee danab lagu qiimeeyo. Marka load ay ka hooseyso 50% load qiimeeyo, ma soo noqnoqoshada hooseeyo roobku 1.5 jeer ee dollar ee hadda lagu qiimeeyo danab qiimeeyo 2 daqiiqo la ogol yahay. nidaamka xakamaynta waxa uu leeyahay shaqo hago, kaas oo socon kartaa, ururiyaan, geeddi-socodka, record oo ka warbixiyaan xogta la xiriira ka meel maxaliga ah ama fog.
matoorrada awood tayo sare leh, qalabaysan PLC-5220, taas oo uu leeyahay shaqo AMF, loo hubiyo in korontada aan kala joogsi lahayn ee bangiyada. Iyada oo taageero ah ATS, load xoogga si degdeg ah u wareegi karaa in matoor load mar ugu weyn ee ay ku guul daraysato. matoorrada The kalsoonaan karo iyo aamusnaan lagu ordi karaan, iyadoo hawada nadiif waafaqsaneyn heerarka Yurub iyo US warshadu hawada ku habboon. Mashiinka waxaa la xiran karaa computer la RS232 AMA RS485 / 422 xira in ay ogaadaan hago.
Marine Generators For Sale, Marine dhaliyaha Shirkado cusub , Sdec Marine Diesel Generators, Marine Diesel Generator Manufacturers, Sdec Marine Diesel Generator,